Miharihary ny patanty vaovao an'ny Apple momba ny rafitra fitehirizana hybrid! - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Miharihary ny patanty vaovao an'ny Apple momba ny rafitra fitehirizana hybrid!
Miharihary ny patanty vaovao an'ny Apple momba ny rafitra fitehirizana hybrid!
Ny injenieran'ny departemantan'ny SoC ao SoC, Sukalpa Biswas sy Farid Nemati, dia niara-nanolotra ny patanty subsystem fitehirizana hybrid maro sosona "rafitra fitehirizana izay mitambatra fitehirizana avo lenta, fitehirizana ambany ambany ary fitehirizana ambany ambany."
Niresaka ny tatitra avy amin'ny Tom's Hardware i digital ary nanipika fa miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka ny DRAM, ny famolavolana DRAM dia nanjary sarotra noho ny tanjon'ny fampiharana samihafa. Ny endrika mifantoka amin'ny fanatsarana ny hakitroka / fahafaha-mitahiry dia mazàna mampihena (na farafaharatsiny tsy mampitombo) ny fantsom-pifandraisana, fa ny endrika mampitombo ny fantsom-pifandraisana kosa dia mampihena (na farafaharatsiny tsy mampitombo) ny fahaizany sy ny fahaizan'ny angovo. Ho an'ny mpamorona SoC, ny fomba hahatratrarana ny fifandanjana tsara indrindra eo amin'ny bandwidth fitahirizana, ny fahafaha-manao, ny fanjifana herinaratra ary ny vidiny ho setrin'ny fitakiana apetraka amin'ny chip dia nanjary fanamby lehibe.
Ny rafitra fitehirizana hybrid an'ny Apple mifototra amin'ny teknolojia vaovao misy patanty dia mety ahitana karazana DRAM roa farafahakeliny farafaharatsiny (ohatra, ny iray dia DRAM avo lenta, ny iray kosa ambany-ambany, na ny DRAM avo lenta ary ny bandwidth avo lenta). Izany dia manampy amin'ny fanatanterahana fiasa mahomby amin'ny angovo sy hampitombo ny fahafaha-mitahiry ho an'ny fitaovana finday sy fitaovana hafa izay mihevitra ny fanjifana herinaratra sy ny tahan'ny fahombiazan'ny herinaratra ho fanalahidy.
Notaterina fa ny patanty dia mamaritra ny fampiasana teknolojia fampifandraisana marobe toa ny through-silicon via (TSV) hahitana rafi-pitehirizana hybrid maromaro izay manambatra DRAM cache haingana sy DRAM lehibe. Ankoatr'izay, ny fampiharana patanty dia manarona ny SoC, fa tsy ny mpanodina PC.
Apple dia nametraka ireo fangatahana patanty voalaza etsy ambony ao amin'ny European Patent Office (EPO), ary koa ireo maso ivoho momba ny patanty any Etazonia, Sina ary Japon.